Mareykanka Oo Ciidamo Dheeraad Ah U Diraya Sacuudiga & Sababta Keentay | Himilo Media Group
Mareykanka Oo Ciidamo Dheeraad Ah U Diraya Sacuudiga & Sababta Keentay
Washington, 13 Oct, 2019 (Himilo)-Pentagon ayaa sheegay ciidammada dheeraadka ah inay Sacuudi Carabiya gacan ka siinayaan weerarrarada Iran uga iman kara.
Pentagon ayaa shaaca ka qaadday kumannaan ciidamo dheeraad ah inuu u dirayo Sacuudi Carabiya si ay boqortooyada Sacuudiga ay gacan uga siiyaan weerarrada uga yimaadda Iiraan.
Wasiirka gaashaan dhigga Mareykanka Mark Esper wuxuu sheegay inuu qalinka ku duugay amarka in ciidamo dheeraad ah laga howl geliyo Sacuudiga, ciidammadaasi oo ku hubeysnaan doono diyaaradaha dagaalka iyo habka difaaca.
Wuxuu intaa ku daray ciidammada ay Washington u direyso Sacuudiga in jawaab looga bixinayo ‘khatarta gobolka soo food saartay’, isla markaana boqortooyada Sacuudi Carabiya looga ilaaliyo ‘weerarrada gar-darrada ay Iiraan ku soo qaaddo’.
Tallaabadan Mareykanka uu Sacuudi Carabiya ciidamo dheeraad ah uga howl gelinaya ayaa imaneysa kaddib markii bishi hore ee September weerarro lagu qaaday goobo Sacuudiga ku yaalla oo saliidda ugu badan laga soo saaro.
“Ciidammada dheeraadka uu Mareykanka u dirayo gacan siinta boqortooyada Sacuudi Carabiya oo 3,000 ah ogolaanshaha in ciidammadaasi la dirana la bixiyey bishii hore” ayuu yidhi afhayeenka Pentagon Jonathan Hoffman.
Mareykanka ayaa tani iyo bishii May ee sanadkan kordhisay ciidammada ka joogo gobolka iyada gaadhsiisay 14,000, sida uu sheegay telefishiinka CNN.
Dhaxal-sugaha boqortooyada Sacuudi Carabiya Maxammed bin Salmaan ayaa naga dalbaday taageerada dheeriga ah ayuu yidhi Mr Esper.
Weerarrada goobaha saliidda ugu badan laga soo saaro ee Sacuudi Carabiya 5% waxaa uu saameeyey shidaalka uu Sacuudiga uu dhoofinayey caalamka oo dhan 5.7 milyan oo fuusto. Warfidiyeenada ayaa sheegaya in weerarkan uu sida oo kale saamayn weyn ku yeeshay qiimaha saliidda ee caalamka.
Mareykankuna wuxuu meesha ka saaray sheegashada Xuutiyiinta Yemen ee ah in ay weerar ku qaadeen labo wershadood oo ay maamusho Shirkadda Aramco ee Sucuudiga laga leeyahay isaga oo eedda weerarkaasi dusha ka saaray Iran.
Maxamed bin Salmaan mar uu weerarkaasi ka hadlayeyna waxaa uu yidhi: “Haddii ay beesha caalamka ay tallaabbada adag oo looga hor tegayo gar-darrada cad ee Iiraan ay qaadi weydo waxaan arki doonnaa saameyn iyo khatar badan oo soo food saarta danaha dunida”.